Wondershare Dr.Fone Maka iOS (Mac) User Guide
Dr.Fone Maka iOS (Mac)
Bido: Okwu Mmalite
Brief Okwu Mmalite
Mmadụ na mberede ehichapụ gị data? Broken gị iPhone ma ọ bụ ọbụna furu efu gị iOS ngwaọrụ? N'agbanyeghị ihe, Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) na-enye gị 3 ngwa ngwa na mfe ụzọ iji nweta niile data azụ gị iPhone, iPad na iPod aka. Na onye ọ bụla otú ahụ, unu pụrụ n'ụzọ doro anya ịhụchalụ kọntaktị niile, ederede ozi, foto, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ tupu mgbake. I nwekwara ike selectively naghachi ihe ị chọrọ.
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (Mac) na A ilekiri
Site na isi window nke Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) Ị pụrụ ịhụ ya niile ịrịba ama: Naghachi si iOS Ngwaọrụ, naputa site na iTunes ndabere Njikwa, naputa site na iCloud ndabere File, rụzie Operating System. Site na ịpị taabụ, mgbe ahụ, gị nweta kwekọrọ ekwekọ atụmatụ karị.
Naputa site na iOS Ngwaọrụ: nke a mma bụ maka ndị ọrụ ehichapụ ọ bụ furu efu data ha iPhones, iPads na iPod aka na chọrọ inwe ndị data azụ. Iji mee ka ọtụtụ ndị mma, ị kwesịrị ịrụ mgbake nri mgbe ị na-ahụ i mere nhichapụ ma ọ bụ gị mkpa data e-efu. Ma, gị data nwere ike overwritten site ọhụrụ data. Mgbe ahụ, ọ dịghị ohere iji nweta ha azụ ọ bụla ọzọ. Lelee nkọwa maka otú iji nke a mma >>
Naputa site na iTunes ndabere File: Ọ bụrụ na ị kwadoo gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ka iTunes, mgbe niile data gị iOS ngwaọrụ ga-juru n'ọnụ ka iTunes ndabere faịlụ. Mgbe ọ bụla ị mkpa ụfọdụ data si iTunes ndabere faịlụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị furu efu gị iOS ngwaọrụ, i nwere ike ịgbalị nke a mma. Lelee mfe nzọụkwụ iji nke a mma >>
Naputa site na iCloud ndabere File: nke a mma ọzọ bụ ma ọ bụ obere ka "naputa site na iTunes ndabere File". Ọ bụrụ na ị kwadoo gị iPhone, iPad, na iPod aka ka iCloud, mgbe ahụ, ị nwere ike nweta data si iCloud ndabere faịlụ mfe na ngwa ngwa. Lee otú iji nke a mma >>
Ịrụzi Operating System: nke a mma ga-ekwe ka iPhone, iPad na iPod aka ọrụ na-iOS ngwaọrụ nke Iweghachite ọnọdụ ma ọ bụ idozi nke mgbe iOS ngwaọrụ rapaara na Apple logo. Lelee nkọwa >>
Dị ka m kwuru na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) nwere 3 mgbake ụdịdị: naputa site na iOS Ngwaọrụ, naputa site na iTunes ndabere Njikwa, naputa site na iCloud ndabere File, faịlụ na-akwado na ngwaọrụ ndị dị iche iche maka onye ọ bụla mode. Ebe a bụ na-akwado faịlụ na ngwaọrụ maka onye ọ bụla mgbake mode.
Ọzọ: Wụnye, Update, Uninstall